पछिल्लो २४ घण्टामा कति स्वाबको परीक्षण भयो ?
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा १२ हजार २६२ स्वाबको पीसीआर बिधिबाट परीक्षण भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशाला उक्त परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका हुन्।
बिहीबार ११ हजार ४४९ स्वाबको परीक्षण भएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा हालसम्म ९ लाख ६८ हजार १८५ स्वाबको परीक्षण भएको छ ।